Warshad shumac soy jumlo ah warshad shumaca codbixiyaha iyo soosaarayaasha | Winby
Shumaca wax lagu kariyo ee galaas shumac shumaca codbixiyaha ku jira weelka shumaca hufan
Shumaca ayaa ahaa mid dhalaalaya. Waxay uraysay sifiican bilowgii laakiin kama badin. Si siman ayey u gubatay oo xitaa weelku wuxuu ahaa mid fudud oo qurux badan.
Waxay uraysaa cajiib waxayna udgoon u leedahay qolkayga jiifka / qolka jiifka.
Midab, ur, astaan ​​iyo xirxirida dhamaantood waa la waalatiri karaa !!!
Sidoo kale bixi adeeg muunad ah.
Waxyaabaha Weel cad oo dhalaalaya + soy wax + dabool bir ah
Cabir 9cm (Wareeg) * 11m (Dherer)
Culayska wax 250g
Miisaanka guud 515g
Hore: dhalada soodhaha dabiiciga ah shumac udgoon
Xiga: Shumac udgoon tayo sare leh
Shumaca Soy Wax Udgoon
Shumaca Soy Wax Glass udgoon
Shumaca udugga ah
Yankee Shumac Udgoon
Dhir dabiici ah udgoon hadiyad shumac hadiyadeed
Electroplated raaxo Soy Wax udgoon Glass Jar ...
shamac qurxin cusub
astaanta gaarka ah ee shumaca qurxinta-Buluug / Grey / Casaan